Phyu Phyu Thin Sympathizer: one more news story on Kyi Linn
Phyu Phyu Thin Sympathizer
one more news story on Kyi Linn
at 8:48 PM Labels: Home Affairs
(KNLA) တပ်မှူးသည် လှေမှောက်သေဆုံးခဲ့သည်ဟု (KNU) မှ အတည်ပြုပြောဆို
ဗထူး။ ရိုးမ ၃။ သြဂုတ် ၁၈၊ ၂၀၀၇
နအဖနှင့်တွေ့ဆုံနေသည့် ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KNLA) မှ တပ်မှူးတဦး သေဆုံးခြင်းသည် လှေမှောက်၍ သေဆုံးခြင်းဖြစ် ကြောင်း (KNU) မှ ယနေ့ အတည်ပြုပြောဆိုလိုက် သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နေ့က နအဖစစ်အစိုးရထံ လက်နက်ချရန် တွေ့ဆုံနေသည့် (KNLA) တပ်မဟာ (၆) တပ်ရင်း (၁၈) တပ်ရင်းမှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ကြည်လင်း သေဆုံးမှုအပေါ် (KNU) မှ ယနေ့ အတည်ပြုပြောဆို လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
သတင်းဌာနအချို့မှ လွှင့်ထုတ်ဖော်ပြချက်များသည် မှားယွင်းနေပြီး တပ်မဟာကြေးနန်းအရ အဆိုပါ တပ်ရင်းမှူးသည် ယခုလ (၁၆) ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ဟောင်သရောချောင်း အတွင်း လှေမှောက်၍ သေဆုံးသွားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
“(၁၆) ရက်နေ့၊ ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်လောက်မှာ ဟောင်သရောချောင်းထဲမှာ လှေမှောက်ပြီး သေဆုံးသွားတယ်။ သူ့အလောင်းကို ခုထက်ထိ ပြန်မရသေးဘူး၊ တပ်မဟာစစ်ဌာနချုပ်က အခုပဲ ကြေးနန်းစာရတာ” ဟု (KNU) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖဒိုမန်းရှာလာဖန်းက ဆိုသည်။
ယမန်နေ့က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အရပ်သတင်းများအဆိုအရ သေဆုံးသူ (KNLA) တပ်ရင်းမှူးသည် နအဖစစ်အစိုး ရ၏ စစ်ဦးစီး(ပထမတန်း) ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းချစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အပြန်တွင် သေဆုံးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ကြည်လင်းအနေဖြင့် နအဖနှင့်တွေ့ဆုံမှုများ အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်နေသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း၊ အဆိုပါ တပ်ရင်းမှူးနှင့်ပတ်သက်၍ မိမိသဘောဆန္ဒအရ နအဖနှင့် တွေ့ဆုံ ခြင်းသည်မကောင်းကြောင်း၊ (KNU) သည် အဖွဲ့အစည်းတရပ်ဖြစ်၍ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ လုပ်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုသည်။
နအဖစစ်အစိုးရအနေဖြင့် (KNU) နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက် တွေ့ဆုံရမည့်လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် လမ်းကြောင်းများအား တရားဝင် အကြောင်းကြားထားသော်လည်း (KNLA) တပ်မဟာ၊ တပ်ရင်း တပ်ဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များအား မကြာခဏဆိုသလို ဖဲ့ထုတ်စည်းရုံး ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဖဒိုမန်းရှာက နအဖစစ်အစိုးရအား “ကျနော်တို့ ပြောစရာရှိတာက သူတို့က မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဗျ၊ အလုပ်လုပ်တာက မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ နည်းလမ်းတကျ လုပ်ရမယ်၊ အခုသူတို့လုပ်တာက မရိုးသားမှုတွေ အများကြီး ရှိနေတယ်၊ အဲ့ဒီနည်းနဲ့ တိုင်းပြည်ကို တည်ဆောက်လို့မရဘူး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်လို့ မရဘူး၊ အဲ့ဒါတော့ သတိထားဖို့လိုတယ်လို့ ကျနော်ပြောချင်တယ်”ဟု ဆိုသည်။
(ဘလော့ဂါမှတ်ချက် - ဒီသတင်းကို http://www.yoma3.org/news/2007/august/knlaco.html ကနေ ယူတယ်။ ပုံကိုတော့ ဘီဘီစီ ၀က်ဆိုက်က ယူပါတယ်။)
ဖြူဖြူသင်း ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးများ
Phyu Phyu Thin's writings
၁။ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ ၀န်းကျင်တုန်းက မြန်မာပြည်ရေးရာ သတင်းစုံတွေ တင်ဖြစ်တယ်။ သတင်းတွေ တစု တဝေးတည်း ဖတ်နိုင်အောင်။
၂။ အခုတော့ ဖြူဖြူသင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ သတင်းတွေ တင်ပါတယ်။
padoh mahn sha lah phan
thin thin aye
su su nway
Burmese community in foreign countries (23)
General news (95)
Home Affairs (307)
irrawaddy diray on 2007 strikes (26)
phyu phyu thin's writing (11)
phyu phyu thin's writing in Eng (3)
letter from su su nway
more radio listeners in sittwe
burma's pp day in mdy & moulmein
အထိန်းသိမ်းခံထားရသူများက အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေဟုဆို yo...
strike in Kyauk Pa Daung
love journal blames the media & activists for the ...
strike impact on patient
demonstration in Taung Goke
Rgn people stays away from usda members
let's drive the evil spirits away
gossip on first lady in nay pyi daw
students in Defence Services Medical Academy suppo...
strike diary ( irrawaddy aug 30 )
လူထုသတင်းထောက်များ နိုင်ငံတကာမီဒီယာနှင့် ချိတ်ဆက်န...
citizen journalism & burma ( voa )
strike of college students in Tavoy
religious sanction against gov sympathizers
small talk with Zinn Mel god ( part 185 )
mdy monks' voice on the strike
return of student unions
death body of knu leader appears
strike diary ( irrawaddy aug 28 )
Movie star Carrey pleads for burma (irrawaddy news...
Movie star Carrey pleads for burma ( voa news )
strike in rgn ( aug 28 )
insein prison condition
strike of su su nway & friends in rgn
karen traditional ceremony in burma thai border
strike in ruby land
very lovely authoritiees in burma
football fans & free prisoners campaign
int prize foraburmese female writer
နော်ဝေတွင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှု လှုံ့ ဆော...
strike supporters in lion city
strike in pegu ( bago )
aapp releases the list of detainees
တဒင်္ဂစံစားမှုကို မစုံမက်ရန် အစိုးရလက်ကိုင်တုတ်များအ...
new protest ( nej )
new protest ( irrawaddy.org/bur )
လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြပွဲ ဒိုင်ယာရီ ဧရာဝတီ သြဂုတ် ၂၆၊ ၂...
moe thee's words on the strikes
the arrests follow the strike ( irrawaddy dot org ...
ko htin kyaw & friends get arrested
big changes in National Convention :)
spdc's response on the strike
more & more raid
thakhin chan tun rejects spdc's word
88 GEN's request on swan-arr-shin
strike diary by irrawaddy.org/bur ( aug 25 )
return of ko htin kyaw?
irrawaddy cartoon on SPDC, USDA & activists
hla myo naung's talk on current condition
phyu phyu thin's talk on aug 23
ဦးမြင့်အေးကို နေအိမ်မှအထွက် ဖမ်းဆီးသွား (NLD)အေ...
the condition outside Rgn ( voa burmese service)
tight security in cities
Journalists Covering Demos Complain of Harassment
strike diary by irrawaddy.org/bur ( Aug 24 )
students cancel strike plan ( nej )
strike diary by irrawaddy.org/bur
latest condition in burma ( voa )
walking continues ( rfa 23 aug )
more protests around burma
video & photos news of 23 Aug
can u go to yoma3.org? if not, i willl upload the ...
strikes continue in rgn ( nej news )
a very good documentation by MiZZiMa!
Rgn condition by rfa
some walkers release
8 nld members & 500 usda guys ( oh my - - -! )
88 gen group's response on the arrest
tight security in Arakan state
local news in Arakan state
small talk with Zinn Mel god ( part 184 )
strike news by rfa
strikes in rgn ( hittaing news )
spdc uses Swan Arr Shin gang to crack down on the ...
about 2000 people join the strike in rgn ( yoma3...
the way activists got arrested ( yoma3)
strike news by irrawaddy
u win naing's complaint on the attack ( rfa )
dvb news on aug 22
photos & cartoons on Rising Fuel Prices ( aug 22 )...
nine activists arrested in rgn
2 mizzima news
nld walkers under pressure
u win nai news in mizzima
strike news by NEJ
north korea embassy coming very soon
review on nu nu yi innwa's book
u win nai under attack
student leaders' pressure on the authorities
say something Box